सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले फेर्‍यो कर्पोरेट नाम, यस्तो छ रिब्राण्डिङका लागि राखिएको नयाँ नाम – Janadesh Daily | ePaper
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले फेर्‍यो कर्पोरेट नाम, यस्तो छ रिब्राण्डिङका लागि राखिएको नयाँ नाम
October 29, 2021 October 30, 2021 by Jandesh Daily
जनादेश टेक वाच ।
सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम परिवर्तन गरी रिब्रान्डिङ गरेको छ । सोसल मिडिया साइट फेसबुकले युवा प्रयोगकर्ताहरुको मानसिक स्वास्थ्यमै असर पारेको आरोप लागिरहेका बेला फेसबुकले आफ्नो कम्पनी नाम बदलेको हो ।
अक्टोबर २८ अर्थात विहीबार आयोजित फेसबुकको वार्षिक कनेक्ट कन्फ्रेन्समा सिइओ मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको नयाँ कम्पनी नाम ‘मेटा’ हुने घोषणा गरेका हुन् । योसँगै फेसबुक कम्पनीले आफ्ना सोसल नेटवर्किङ प्लाटफर्महरु र अग्मेन्टेड रियालिटी तथा मेटाभर्स लगायतका प्रोजेक्टहरुको बीचमा विभाजनको रेखा खिचेको छ ।
यस पश्चात् मातृ कम्पनीको नयाँ ब्यानरभित्र अन्य प्रडक्टहरुसँगै सोसल साइट फेसबुकको एप पनि रहनेछ । पछिल्लो समय आफ्नै पूर्वकर्मचारीले सुलसुलेको रुपमा अमेरिकी संसदमा फेसबुकका गोप्य तथ्यहरुको खुलासा गरिदिएसँगै फेसबुक दबाबमा परेको थियो ।
साथै फेसबुकले आफुलाई केवल सोसल मिडिया भन्दा व्यापक भएको कम्पनीको रुपमा चिनाउन चाहेको देखिएको छ । तर यसरी नाम परिवर्तन गर्दैमा हामीले चलाउने फेसबुक, ह्वाट्सएप वा इन्स्टाग्रामको नाम भने फेरिने छैन ।
फेसबुकले पछिल्लो समय स्मार्ट चश्मा लगायतका कन्जुमर हार्डवेयर उत्पादन सुरु गरिसकेको छ र यसका लागि १० हजार भन्दा धेरै कर्मचारी खटाइसकेको छ । फेसबुकलाई मेटाभर्स कम्पनीको रुपमा स्थापित गरिने कम्पनीका प्रवक्ताले बताए ।
फेसबुक मेटाभर्समा पनि प्रयोगकर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ । सामान्य हिसाबमा बुझ्दा मेटाभर्स भन्नाले भर्चुअल रियालिटी (भीआर) को विस्तारीत रूप हो । हाल भीआर गेमिङहरूको लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । तर अब भीआरमार्फत हेडसेट प्रयोग गरी मान्छेले एकअर्कासँग कुराकानी गर्न, गेम खेल्न तथा काम गर्न सक्ने छन्।
त्यस्तै फेसबुकले ध्यान केन्द्रीत गर्न चाहेको मेटाभर्समार्फत पनि प्रयोगकर्ताले काम गर्न, खेल्न, कन्सर्ट गर्न, सिनेमा हेर्न लगायतका कामहरू गर्न सक्छन् ।
फेसबुकले गरेको परिवर्तनबारे बुझ्नु पर्ने ४ तथ्य
#हामीले चलाउँदै आएको फेसबुकको नाम पनि परिवर्तन हुन्छ?
#के चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त?
#किन गरियो परिवर्तन?
#के हो मेटाभर्स ?
Posted in जनादेश विशेष, मुख्य समाचार, सामाजिक सञ्जाल, सुचना प्रविधि